ယနေ့ညပွဲစဉ်များ ၂၂-၉-၂၀၁၂ စနေနေ့ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ယနေ့ညပွဲစဉ်များ ၂၂-၉-၂၀၁၂ စနေနေ့
ယနေ့ညပွဲစဉ်များ ၂၂-၉-၂၀၁၂ စနေနေ့
Posted by MgMobile on Sep 22, 2012 in Copy/Paste | 12 comments
အားလုံးဘောလုံးဝါသနာရှင် ညီကိုများအားလုံး မင်္ဂလာပါ။ ၂၂-၉-၂၀၁၂ စနေနေ့ မှာယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့် ပရီးမီယာလိဂ် စီးရီးအေ နှင့် စပိန်လာလီဂါ ပွဲးစဉ်များထဲမှ အကောင်းဆုံးပွဲးစဉ်များကို ရွေးထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ညမှာ ယှဉ်ပြိုင်ကစားကြမယ့်ပွဲစဉ်များနဲ့ အချိန်စာရင်းပါ
၆း၁၅ ဆွမ်ဆီး & အဲဗာတန်
၈း၃ဝ ချဲလ်ဆီး & စတုတ်စီးတီး
။ ဆောက်သမ်းတန်း & အက်စတွန်ဗီလာ
။ ဝက်စ်ဘရွန်း & ရီဒင်း
။ ဝက်စ်ဟမ်း & ဆန်းဒါးလန်း
။ ဝီဂန် & ဖူလ်ဟမ်
။ ဇာရာဂိုဇာ & ဆိုဆာစူနာ
၁ဝး၃ဝ ဆဲလ်တာဗီဂို & ဂီတာဖေး
။ ပါးမား & ဖီအိုရင်တီးနား
၁၂း၃၀ ရီရဲလ်ဘက်တစ် & အက်စ်ပန်ညို
၁း၁၅ ဂျူဗင်တပ် & ချီယေဗို
၂း၃ဝ ဘာစီလိုနာ & ဂရန်နာဒါ တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ အားလုံးကို ကျနော် ရဲ့အကြိုတ်ဆုံးပွဲလေးတွေကို မတင်ပြခင်မှာ ဦးစွာပထမ ပြောကြားလိုတာကတော့ ဘောလုံးပွဲ ဆိုတာဟာ စိတ်ဝင်စားစရာ အကောင်းဆုံးနဲ့ ကမ္ဘာလူကြိုတ်အများဆုံးအားကစားနည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့လူအများစိတ် ဝင်စားခြင်းကိုခံရတဲ့ အားကစားဖြစ်တာနဲ့အညီ အားကစားရဲ့နောက်ကွယ်မှာ လောင်းကစားဆိုတာဟာလဲပဲ ပါလာပါတော့တယ်။ ဘောလုံးပွဲနဲ့ပတ်သတ်လို့ လောင်းကစားပြုလုပ်ရတာဟာ ကံစမ်းတာထက် ညံစမ်းတာလို့ ကျနော် ကတော့အပြည့်အဝလက်ခံထားပါတယ်။ ဘောလုံးပွဲစဉ်များဟာဆိုရင် အင်မတန်မှ စိတ်ဝင်စားစရာ ကောင်းလှသလို အင်မတန်မှ ပညာသားပါလှသော လှည့်ကွတ်များနဲ့ ပြည့်နက်နေတဲ့ ကစားနည်းတစ်မျိုးပါ။ ရှည်ရှည်ဝေးဝေးပြောမနေတော့ပါဘူး ကျနော် အမြင်ကို တစ်ခါတည်ဖွင့်ချရရင် ဘောလုံးပွဲမှာ အပိုင်ယူခြင်းနဲ့ မက်လုံးပေးခြင်းဆိုပြီး နှစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်။ များသေားအားဖြင့်တော့ ဒီနှစ်မျိုးကနေပြီးတော့ပဲ ကစားသွားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ အပိုင်ယူခြင်းနဲ့ မက်လုံးပေးခြင်း ဖော်မြူလာ ဖြင့် ယခုပွဲစဉ်များထဲမှ အကောင်းဆုံးအဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့ နံပါတ် ၁ အသင်းကတော့ “ဘာစီလိုနာ” ဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် ၂ ကတော့ “ဝက်စ်ဘရွန်း” နှင့် နံပါတ် ၃ “ဆွမ်ဆီး” အသင်းတို့ကို ဒီညရဲ့အကြိုတ်ဆုံးအဖြစ်ရွေးချယ်ထားရပါတယ်။ ဘာစီလိုနာ & ဂရန်နာဒါ တို့ရဲ့အချက်အလက်တွေကိုတော့ ဖော်ပြမပေးတော့ပါဘူး ဘာစီလိုနာကို ဒီညအတွက် အကြိုတ်ဆုံး နံပါတ် ၁ အဖြစ်ရွေးချယ်ရာမှာ ကျနော် အနေနဲ့ ဘာစီလိုနာဟာ အနည်းဆုံး ၃ ဂိုးပြတ်ပါမယ်။ ဥရောပ ဈေးကွပ်မှာ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ ဖွင့်လှစ်မှုများကို အချိုးကျ ပြန်လည်ချိန်ညှိရမယ်ဆိုရင်တော့ ဘာစီလိုနာ ၃+၁ဝ ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းကိုဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ ၃+၁ဝ ဆိုတဲ့ဈေးနှုန်းဟာ သာမာန်အသင်းများရဲ့ ဂိုးပေါင်းဈေးဝန်ကျင်ထက်ကို ကျော်လွန်နေတာကြောင့် ဘာစီလိုနာ ဟာဒီပွဲမှာ အနည်းဆုံး ၃ ဂိုးပြတ်မယ်လို့ခန့်မှန်းလိုက်ရသလို အစွန်းတွက် ၁ဝ ဟာဘာစီလိုနာပရိတ် သတ်များရဲ့ အပိုင်ယူထားတဲ့ ကိန်းဂဏန်းတစ်ခုလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကို တင်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်။ နံပါတ် ၂ ဝက်စ်ဘရွန် & ရီဒင်း ဝက်စ်ဘရွန်း ရီဒင်း ပွဲစဉ်ကိုတော့ ဥရောပ ဈေးကွပ်မှာ ဝက်စ်ဘရွန်း ၁+၂၅ လို့ဖွင့်လှစ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အချက်အလက်တွေကို ခဏမေ့ထားပြီးစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ဝက်ဘရွန်း ၂ ဂိုးပြတ်မလားမပြတ်မလား။ နှစ်ဂိုးပြတ်မယ်မပြတ်ဘူးတော့ သေချာမပြောနိုင်ဘူး ပြောနိုင်တာကတော့ ဝက်စ်ဘရွန်း အနည်းဆုံး အနိုင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီပွဲစဉ်ဟာဆိုရင်လည် ဝက်ဘရွန်ပရိတ်သတ်များအတွက် ၂၅ ပြားကို အပိုင်ယူပေးထာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ နံပါတ် ၃ အနေနဲ့ နောက်ဆုံးခန့်မှန်းမှုပွဲစဉ်တစ်ပွဲကတော့ ဆွမ်ဆီး & အဲဗာတန် ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲဗာတန်ရဲ့ ယခုလက်ရှိ ဈေးဖွင့်လှစ်မှုမှာ =၅၅ လို့ ဥရောပဒိုင်တော်တော်များများက ဖွင့်လှစ်ထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပွဲစဉ်မှာ ဆွမ်းဆီကိုရွှေးချယ်ပေးလိုက်ရတာကတော့။ ကျနော် အနေနဲ့ ဆွမ်းဆီး ဟာအနည်းဆုံးသရေကျမယ်လို့ ခန့်မှန်းသုံးသပ်မိပါတယ်။ ယခု ဆွမ်ဆီးပွဲစဉ်ရဲ့ ကိန်းဂဏန်း ၅၅ ဟာဆွမ်ဆီးပရိတ်သတ်များကို အပိုင်ရရည်ညွန်းကိန်း သာဖြစ်ကြောင့်ကျနော် အကြိုတ်ဘောလုံးပွဲစဉ်လေးများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျား။ ဖတ်ရတာ အရသာမတွေ့ခြင်းများ မနှစ်သက်ခြင်းများတွေ့ရှိပါက ကျနော် ၏ညီကိုများ အားလုံးမှ ခွင့်လွှတ်ပေးကြပါရန်နှင့် နောက်နေ့ နောက်နေ့တွေမှာ ယခုထက်ပိုမို ကောင်းမွန်အောင် ကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပါကြောင့် . . . . . . . . .
Mobile13 has written 39 post in this Website..
View all posts by MgMobile →
ရိုက်တိုင်းရှုံးမောင်တဲ့ .. .
အကြိုက်ခြင်းတူတယ် “ဘာစီလိုနာ” “ဝက်စ်ဘရွန်း” နှင့် “ဆွမ်ဆီး” အသင်းတို့ အပြင် “ဆောက်သမ်းတန်း” နဲ့ “ဖီအိုရင်တီးနား” ကိုပါ ထပ်ဖြည့်ပါရစေ။
ကောင်းတယ်ဗျာ တစ်ပတ် တစ်ပတ် ဘောလုံးပိုစ့်တင်နေရတာနဲ့ ကိုယ်ရေးချင်တဲ့ ရီးရဲလစ်ဇင်လေးတွေ ကဗျာလေးတွေ မရေးအား ဖြစ်နေခဲ့တာ ။ အခုကစပြီး လိုင်းပြောင်းလို့ရပြီဗျို့
ကိုပေ… တခြား တယောက်ဝင်လာလို့… ဘောင်ရှေး.. ဘေးရှောင် တော့မှာလား…
mg htoo1 says:
ကျွန်တော်မောင်ထူးကတော့ ကိုပေမှကိုပေပဲ။ ကိုပေမဟုတ်ဘဲ တခြားသူရေးတဲ့ ဘောလုံးပို့စ်ဆို ဆားမပါတဲ့ဟင်း လိုပဲ။ စကားမစပ် ရွာထဲမယ် အမှိုက်တွေ ပေါလိုက်တာ။ ကိုယ့်ဘာသာနေကြပါဗျို့။ အာရုံတွေနောက်တယ်။ ယုံကြည်မှုဆိုတဲ့အရာကို လွယ်လွယ်လုပ်ယူလို့မရဘူး၊ ကျွန်တော်မောင်ထူး ကိုုပေနဲ့ လက်တွဲလာတာ ၂ နှစ်ရှိပြီဗျ။ ကိုပေရဲ့ ပို့စ်မဟုတ်ရင် ဆောရီးပဲ။
ညီတော်မောင် မောင်ထူးတယောက် ကိုပေရဲ့ ပို့စ်ကိုမျှော်လင့်နေပါကြောင်း။
စိန်ကောင်းကျောက်ကောင်းရောင်းတဲ့နေရာမှာ ဆေးရိုးသယ်များလည်း အဝေးသို့ ဂျောင်းပါစေကြောင်း
ခန့်မှန်းချက်လေးတွေတော့ မဆိုးပါဘူးလို့ပဲပြောပါရစေ….ကျနော့်လို..ဘာမှ့..မသိ့ပဲ…ရမ်းတုပ်နေရတဲ့…နလပိန်းတုန်းထက်စာရင်တော့….ပေါ့…….ဆက်လက်..စောင့်ကြည့်..အားပေးသွားပါ့မယ်…တစ်ခု့တော့..သတိ့ရပေးဗျာ…ဘော်လုံးဂရေဇီ..တွေဟာ…ဘော်လုံးပွဲကို..လောင်းတယ်ဆိုတာ…လောင်းနေရတာကိုပျော်တယ်…အဲ့ဒီထက်..ပိုပျော်တာက..ကိုယ့်မှန်းထားတဲ့ အသင်း…မှန်တယ်ဆို..ပိုပျော်တာပေါ့ဗျာ..အညာသားတို့က…ဘော်လုံးပွဲဆို..ချစ်သူရည်းစား.ထက်ပို အချိန်ပေးတယ်..
အမှန်ပြောရရင် ဦးပေ ရေးတာလောက် မရှင်းဘူးဂျ ..
ဒါပေသိ …. ဘယ်သူရေးရေးပါ …
ဘောလုံးအကြောင်းဆို ဖတ်ပြီးသားပဲ …
foot y says:
ကျွန်တော့် ရဲ ့ဆရာ ဦးပေ ထက်ပိုပြီး ပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားပါမယ်
ယနေ့ညအတွက် ဈေးကွပ်လှုပ်ရှားမှုအရ ထပ်မံအားဖြည့် ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့
ဂိုးပေါင်းအတွက် ဇာရာဂိုဇာ ပွဲကို ဂိုးပေါင်းအောက် နဲ့ ဘာစီလိုနာပွဲကို
ဂိုးပေါင်းအပေါ် ဇာရာဂိုဇာပွဲဟာ ဥရောပဖွင့်လှစ်မှုအရ ၂= ဆိုတဲ့ဈေးဟာ
အများဆုံး ၂ ဂိုးထက်မပိုပါဘူး။ ဝ-ဝ လောက်ကျမယ့်အနေအထားပါ။
ဘာစီလိုနာပွဲကတော့ ၄+၁ဝ ဆိုတဲ့ အနေအထားဟာ ၁ဝ အပိုင်ယူထားတာပါပဲ
၄ ဂိုးအနည်းဆုံးပါ။ ဂိုးပေါင်းမနှစ်သက်သူများအတွက် ရွေးချယ်ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့
လာလီဂါဈေးကွပ် ကသာဝယ်ယူရန်သင့်တော်တာမို့ လာလီဂါပွဲစဉ်တစ်ပွဲဖြစ်တဲ့
ရီရဲလ်ဘက်တစ် ကိုရွေးချယ်ပေးလိုက်ရပါတယ်။ ဥရောပ ဖွင်လှစ်မှုအရ ၁+၅ဝ ဟာ
ဘက်တစ် ၁ ဂိုးသေချာပေါက်ပါ။ ဘက်တစ် နှစ်ဂိုးအသာလောက်ဖြင့် အနိုင်ရသွားမယ်လို့
၃ ပွဲကို တစ်ပွဲနှုန်းနဲ့ အရှုံးများပြီး အမြတ်နည်းခဲ့တဲ့အတွက်
တင်္ဂနွေ ညမှာ ပြန်လည် ရယူမှုများနဲ့ ရွင်လန်းနိုင်ကြစေရန်
တင်္ဂနွေ အတွက်ပွဲစဉ်များကို ဆက်လက်အားပေးပါဦး။